Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Seychelles » Ịhapụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ mgbe ezumike na Seychelles
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Ịrụ ọrụ • Akụkọ gbasara Seychelles • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
N'ịbụ onye ama ama maka ọmarịcha ịma mma ya, Seychelles emeela onwe ya aha dị ka ebe na -aga n'ihu na -aga n'ihu na -enwe ihe dịka 47% nke ala ya chebere ma mara maka nnukwu mbọ ya ịchekwa ihe nketa eke eke sitere na ya site na omume na usoro ga -adigide.
Seychelles bụ ebe mmeri na-emeri emeri na mpaghara Oke Osimiri India.
Agwaetiti Seychelles abụrụla ebe izizi mepụta obodo ntanetị na ikpo okwu Global Impact Network.
Nke a bụ ikpo okwu dijitalụ nke na-enye ndị ọrụ ohere ịlele nha ma gosipụta omume na-adigide site na ihe egwuregwu na ihe ịma aka enwere ike gbasara nsogbu ụwa.
Seychelles bụ 38th na Index Performance Performance na 2020, nke mbụ na mpaghara Sub-Saharan yana dịka obere agwaetiti; Nchekwa okike bụ ụzọ ndụ na Seychelles.
Na -eburu n'uche na ọ bụ ezie na njem nwere ọtụtụ mmetụta dị mma, ọ nwekwara ike bute gburugburu ebe obibi site na itinye nrụgide na gburugburu ebe obibi na -emebi emebi ma na -enye aka na ịrị elu ikuku ọkụ. Seychelles, dị ka ebe na-adịgide adịgide na-emeri emeri na mpaghara Oke Osimiri India, na-ejigide njem dị mkpa dị ka akụkụ dị mkpa nke usoro azụmaahịa ya.
Nke a bụ ihe ndị ọbịa nwere ike ime iji nyere aka bụrụ akụkụ nke mmegharị njem na -adigide mgbe ị nọ ezumike na Seychelles:
Mara ebe ị na -aga tupu njem gị
Iji nweta ahụmihe zuru oke nke ebe ị na -aga, mara ihe pụrụ iche nke Seychelles tupu ị bịarute. Gụọ banyere agwaetiti dị iche iche ewepụtara maka nchekwa na ahịhịa na anụ ọhịa pụrụ iche nke Seychelles iji mata ebe ị ga -aga iji welie ahụmịhe gị.
Kwado ụlọ ebe obibi enyi na enyi na ndị na-enye ọrụ njem ndị ọzọ nwere ọrụ mgbe ha nọ na Seychelles. Ọtụtụ ndị mmekọ njem nlegharị anya maara ihe na -enwe mmetụta site na obere mmegharị ihu na gburugburu ebe obibi site n'iji ume emeghari emezi, inwe usoro nchịkwa mkpofu dị irè, imegharị ihe, ma ọ bụ ọbụna na -ewu ihe site na iji ihe emere emere.
Mgbe ị nọ na Seychelles, ị nwere ike belata akara ukwu carbon gị site na iwere igwe ịnyịnya ka ị gaa agwaetiti pere mpe dịka Praslin na La Digue.
Emela ihe ọjọọ
Mgbe ị na -eleta agwaetiti ndị mara mma, lezie anya ka ị ghara ịkpaghasị gburugburu ebe obibi na -emebi emebi. Ọ dị oke mkpa ka ị ghara iwepụ ngwaahịa anụmanụ, okwute, osisi, mkpụrụ ma ọ bụ akwụ akwụ nnụnụ ma zere imetụ aka ma ọ bụ iguzo n'elu mmiri coral. Ya adịla mgbe ị ga -ewepu shells dị ndụ n'oké osimiri, zere ịzụrụ ngwaahịa nke emere na shei mbe ma ọ bụ ụdị ndị ọzọ nọ n'ihe ize ndụ.
Enwere ohere nchekwa dị ịtụnanya maka ndị ọbịa isonye na Seychelles site na ịdị ọcha osimiri mgbe niile ruo isonye na mmemme mweghachi echefuru echefu ihe omume nchekwa mmiri ndị ọzọ, ndị ọbịa nwere ike inye aka site na ịkpọtụrụ obodo gburugburu ebe obibi.
Paradaịs nọ n'ihe egwu site na nsị na ala ma n'oké osimiri; cheta na -eburu gị ihe mkpofu gị mgbe niile. Achịcha dị ka akpa plastik na -emerụ ndụ mmiri dịka azụ na nduru, na -emesịa mechaa na eriri nri.
Mmiri bụ akụ dị oke ọnụ ahịa na obere agwaetiti; mgbe ị nọ n'agwaetiti biko chekwaa mmiri. Ị nwere ike nyere aka mee mmetụta site na ịsa mmiri dị mkpụmkpụ yana site na iji akwa akwa ịsa ahụ ọzọ karịa ịsa ya kwa ụbọchị.